» Xog: Xasan Sheekh & Qoyskiisa oo ka guuraya Madaxtooyada & Dalka ay ku noolaan doonaan…Badweyntimes.com
Xog: Xasan Sheekh & Qoyskiisa oo ka guuraya Madaxtooyada & Dalka ay ku noolaan doonaan…
Feb 12, 2017 - 1 Jawaab
Sida aan xogta ku helnay Todobaadka soo aadan ayaa la filayaa in Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Mxaamuud uu xilka si rasmi ah u wareejiyo uuna ka baxo xarunta Madaxtooyada Soomaaliya balse waxaa warar kala duwan kasoo baxayaan halka uu ku noolaan doono ma sii joogayaa Muqdisho mase waxaa uu aadayaa dibada sida looga bartay Madaxdii isaga ka horeeyay.
Sida aan Wararka ku heleyno Xasan Sheekh Maxamuud iyo Qoysaskiisa ayaa ku mashquulsan xir xirashada boorsooyinkooda si ay u baneeyaan xarunta Madaxtooyada Soomaaliya ay markan soo degayaan Qoyska Madaxweyne Farmaajo.
Xasan Sheekh Maxamuud ayaa looga adkaaday doorashadii 8-dii bishan ka dhacday magaalada Muqdisho, waxaana dad badan ay filayeen in Xasan Sheekh uu sii joogi doono xarunta Villa Soomaaliya 4-sano oo kale.
Warar hoose aan helnay ayaa sheegaya in Madaxweynihii hore ee Soomaaliya iyo qoysaskiisa ay u guuri doonaan dal dibada ah oon walio la cadeyn, wararka qaar ayaana sheegaya in ay degi doonaan dalka Turkiga oo qasri looga diyaariyay.
Madaxweyne Farmaajo oo hada degan Hotelka Jaziira ayaa la filayaa in si rasmi ah ugu guuro xarunta Villa Soomaaliya maalmaha soo socda, waxaana hada socda qaban qaabada xaflada xil wareejinta iyo caleemo saarka.
« Warbixinta Ka HoreysayDAAWO: Reer Baydhabo oo iska tuuray Sawirka Shariif Xasan, kuna bedalay midka Farmaajo…
Warbixinta Xigto »DEG DEG: S/land oo si rasmi ah u aqbashay in Saldhig Millatari Imaaraadka ka dhistaan Berbera.
HADAAD ISTICMAASHO FACEBOOK HALKAAN KU REEB FIKIRKAAGA	Hal Jawaab : Xog: Xasan Sheekh & Qoyskiisa oo ka guuraya Madaxtooyada & Dalka ay ku noolaan doonaan…
axmed says:	February 12, 2017 at 10:57 am	Waa in lala Xisaabtamaa horta, SIdUu u guurayaa,? Turkiga xiriirka haloo gooyo.